Wararka - Sidee loo doortaa Cadka haya?
Sidee loo doortaa Cadka haya?
Maalmahan, cadka haysta wuxuu ku qalabeysan yahay hudheel kasta, maqaayad, iyo goob nadaafadeed, sidoo kale wuxuu dabooli karaa baahideena. Markaad dooranaysid inaad qalabeysid aaladaha fayodhowrka, nudaha haya waa lama huraan. Waxay kahortagi kartaa biyaha inay daadadaan. Aad ayey ugu habboon tahay. Dabcan, makhaayado badan ama madbakhyada qaarkood ayaa sidoo kale leh unugyo haysta.
Maaddaama isticmaalka nudaha haysta uu yahay wax caadi ah, oo ay jiraan noocyo badan oo suuqa yaalla, waxay qaadataa waqti yar oo dheeri ah in lagu doorto nudaha haysta.
Huteeladuhu waxay ubaahan yahiin xajiyaha nudaha xitaa inbadan, waxayna ubaahanyihiin noocyada birta birta ah, maxaa yeelay birta birta ah waa iska fudud tahay in la nadiifiyo Waa amni oo waxay leedahay nolol adeeg dheeri ah Waxay ka tarjumaysaa jawiga hudheelka si ka wanaagsan.
Jawiga musqusha ayaa ahaa mid aad u qoyan oo qubeyskiisa biyo lagu buufiyay. Nudaha hayaha daboolkiisu wuxuu kaliya ka hortagaa biyaha inay ku faafaan nudaha haysta.
Qofka haysta warqada musqusha, birta birta ah ayaa ugu fiican xulashada. Naxaas nadiif ah oo si gaar ah loo daweeyay ayaa sidoo kale la heli karaa, kaas oo aan biyuhu karin oo waaraya.
Sababtoo ah makhaayaddu waa meel wax laga cuno, waxaa miiska ku jiri doona xubin nudaha haysa Sidoo kalena waa meesha ugu fiican ee lagu isticmaali karo unugyada miiska haya.
Guud ahaan marka laga hadlayo, jikada si yar ayaa loo isticmaalaa aagga jikada ayaa aad u yar. Haddii aad rabto inaad doorato, waxaa ugu wanaagsan in la doorto nudaha haya ee aan qaadanaynin booska.Waxaa muhiim ah in la ogaado in nudaha hayaha aan la dhigin meel aad ugu dhow biyaha iyo ilaha dabka.
Markaad dooranaysid nudaha haya, lama iska indha tiri karo.Waa inaad sidoo kale fiiro gaar ah u leedahay qaabka, qiimaha iyo tayada meesha aad u baahan tahay.
Dongguan Shengrui Metal Crafts Co., Ltd. waa soo saare xirfadlayaal ah isla markaana dhoofisa ku takhasusay naqshadeynta iyo soo saarista noocyada kala duwan ee dheelitirka biladaha isboortiga iyo jillaab isboorti bir ah. birta haysta iwm.